Aragti: Xildhibaane Marka Hore Difaac Danta Dadweynaha – Kalfadhi
Waxaa Baraha Bulshada qabsaday xildhibaanno ka sheeganaayo in dhibaato ka soo gaartay ciidamo farabadan oo waddo kasta qori lataagan. Ciidamadaasi mar waa ammaananyihiin, marna waa eedeysanayaal.
Mar waxaa lagu ammaanayaa in aay yihiin ciidan ku shaqeeya amar iyo kala sarreyn, marna waa eedeysanayaal sababta oo ah muwaadiniinta ulama dhaqmaan sida muwaadiniin ee badankood dadka waxay ula dhaqmaan sida ayaga oo aan waddankaan u dhalan. Tusaale ahaan aniga shakhisyan dhul Muslim iyo Gaalaba waan tegay sida ay iila dhaqmaanna waligeey ma arag. Dabcan 5-ta farood ma sinna oo askarta xabbad-xabbad dadka si fiican ula dhaqma waa ku jiraan balse dhibkooda ayaa dheeftooda ka badan. Mararka qaarkood waxaan ku fikiraa sida ay magaaladu ugu ekaan laheed magaalo nabad ah, dadkuna si nabad ah waddooyinka ku mari-lahaa, bal adiguba indhahaaga ku soo arag ISGOYSKA DABKU wuxuu ku fiican-yahay in aad marto xilliga ASKARTU ka maqan-yihiin, waxayna ugu xuntahay in aad marto marka askartu joogto..
Xil-Dhibaan Iyo Xasaanad
Dhanka kale waxaa iga su’aal ah, horta yaa loogu talagalay in loogu adeego xasaanadda? Xasaanaddu ma wax xildhibaanku shakhsiyan u leeyahay baa mise waa wax loogu talagalay in lagu ilaaliyo xildhibaanku kolka uu xil qaran gudanaayo asaga oo u adeegaaya bulshada.
Xildhibaane hadii aad dooneyso in laguugu ixtiraamo xasaanadda xildhibaanimo fadlan marka hore xildhibaanimada ugu shaqeey bulshada, haddiise aay dhacdo in aad adigu ku adeegato si aad ugu gaarto dantaada gaarka ah ogsoonow in aaysan shacbiga ku hayn kulayl iyo qaboow toona midna in lagu rafaadiyo, sababtoo ah muwaadiniintu kuuma arkaan xildhibaan xasaanadiisa qaranimo ugu adeegaaya qaranka iyo daryeelka bulshada ee waxaad tahay daneeyste.
Sidaas darteed xil-dhibaane 2 arrimood midkood dooro:
xildhibaannimada bulshada ugu adeeg si bulshadu kuugu hiilliso haddii lagu soo xad-gudbo xasaanaddaada. Yacni danta qaranka ka hormari dantaaga shakhsiga ah. Markaas ayaadna mudnaan-doontaa in la-ilaaliyo xasaanadda xildhibaannimo.
xil-dhibaannimada ku shaqayso, cidna waxba ha ugu qaban, balse waxaa lagaa rabaa in aad adkaysato haddii askartu xabbad kugu ridaan, haddii jidka lagugu rafaadiyo, adkayso calaacalkana joogi, intaas waxaa kuu sii dheer in aadan xildhibaan qaran ahen, sababta oo ah Qaranka uma shaqaysid ee waxaad u shaqaysaa dowladda, waxaana rejeynayaa mudane xildhibaane in aad kala taqaano qaranka iyo Dowlada.
Qaranku waa dareenka iyo taariikhda ummadda, halka dowladu ka tahay xubno kooban oo muddo kooban xil dowladeed loo doortay, qaranku waa ma guure, halka dowladnimadu guur-guurto.
Gunaanadkii Iyo Gebagebadii
Xildhibaane si laguugu hiilliyo, marka hore u hiilli shacbiga wax magaratadu ku rafaadineyso waddooyinka si aad marka hore u noqato xildhiban qaran. Hadiise aysan kuu suurta geleeyn in aad xildhibaan qaran noqato, fadlan ku ekow in aad tahay xildhibaan dowladdii hebel.
W/Q: Dr Xasan Shiikh Cali
Bare iyo Falanqeeye Siyaasadeed